ယခုသတင်းအတွက် မှတ်ချက်အားလုံးကို ဖတ်ရှုန် မန္တလေးမြို့ ဗုံးပေါက်ကွဲမှု အစွန်းရောက်လက်ချက်ဟု ဦးဝီရသူဆို
Bo Bo နေရပ်- Mandalay :
Last night i have listen BBC and VOA news. Mandalay police already caught2persons. Police did not say they were Muslim or Buddhist. Why you said that is Muslim Terror. Your position is higher than Thein Sein? I think even Thein Sein is afraid of you.
Jul 31, 2013 01:04 PM
Linn နေရပ်- Singapore :
How do you know this is Muslim's terror? Even Thein Sein never talk about this. Are you Police or C.I.D or Monk?
Jul 30, 2013 06:39 AM
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖေါ် နေရပ်- ရန်ကင်း :
မြွေမှန်ရင် တွင်းဝင်ဖြောင့်ပါလိမ့်မယ်။ မကြာပါဘူး။ စောင့်ကြည့်ပါ။
Jul 24, 2013 05:04 PM
do not try to becomeawellknown person by preaching one-sided stories....you and you fellows should read RFA comments by people outside Myanmar....
နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်အနေနဲ. စစ်တပ်က ဗုံးခွဲတာဖြစ်မှာပါ။ တိုင်းပြည်မတည်ငြိမ်မှ စစ်တပ်က ပြန်ပြီး အာဏာသိမ်းရတာပါဆိုပြီး အာဏာပြန်ယူ၊ ဒီမိုဂရေစီဆိုတာ မျှော်လေဝေးဝေး၊ ဒါးခုတ်ရာ လက်လျှိ၊ မုတ်တွေလို မဖြစ်စေဖို. ဟိန္ဒူ နဲ. ခရစ်ယာန် သတိသာရှိကြပါစေ။
Jul 23, 2013 06:43 PM
Who is accused/culprit to become an Islamic Extremists ? Actually, it was born by Military government and U Than Shwe
who contributed to Thu who try to eliminate all of Muslims .So some of Muslims all over the world can't affort to suffer when they see the scenes of killing in MAKE HTEE LA, They start to strike back at the Buddhist extremists.
(CT3SWKC နေရပ်- CT3SWKC :
အကြမ်းဖက်မှုကို လုံးဝဆန့်ကျင်ပါတယ်၊ ဦးဝီရသူဟာ သံဃာတော် မဟုတ်ဘဲ သက်န်းဝတ်တဦးသာ ဖြစ်ပါတယ်၊
Jul 23, 2013 09:11 AM
ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ် “အစ္စလာမ် အစွန်းရောက်တွေရဲ့လုပ်ရပ်” လို့ပဲပြောနေ…………….………… မင်းတို့ကိုယ်တိုင်က အစွန်းထင်မကဘူး အစုတ်တောင်ရောက်နေပြီ မဟုတ်လား………..
Lu Lay :
ဘယ်သူအစွန်းရောက်ရောက် ကိုယ်မရောက်စေရန် တပည့်များကို တရားဟောကြားပေးပါဘုရား။
ကိုယ့်ကြောင့် မြန်မာလူထုအတွင်း စိတ်ဝမ်းမကွဲပြားကြစေရန် နှင့် ဒုက္ခ မရောက်ကြစေရန်အတွက် မေတ္တာ တရားထားရှိကြရန် ဟောကြား ပေးပါဘုရား။
Jul 23, 2013 07:37 AM
you are an exmtremist monk too.......you reap what you sow....
Jul 23, 2013 06:30 AM
အစွန်းရောက်သူက အစွန်းရောက် လက်ချက်ဟုပြောပါသည်
Jul 23, 2013 04:16 AM